Hong Kong : Mihorohoro mafy ny ao amin’ny Cathay Pacific, noroahana ny lehiben’ny sendikà noho izy nanohana ny hetsipanoherana teny anaty media sosialy · Global Voices teny Malagasy
Manamafy ny vahohony eo amin'ny tontolon'ny fandraharahàna i Pékin
Voadika ny 08 Septambra 2019 8:29 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Français, Español, 日本語, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 25 Aogositra 2019)
Rebecca Sy. Sary avy amin'ny inmediahk.net. Nahazoana alàlana
Noroahan'ny orinasa fitaterana an'habakabaka Cathay Dragon, zana-tsampan'ny Cathay Pacific, i Rebecca Sy, filohan'ny sendikàn'ireo mpiasa mpikarakara sidina ao aminy, rehefa avy voamarina fa izy tokoa no nanoratra ireo lahatsoratra telo tao amin'ny Facebook-ny ho fanohanana ireo mpanao hetsipanoherana ao Hong Kong.
Ny famolahan'ny Cathay Pacific
Ny 9 Aogositra 2019 no nanomboka ny afindrafindrao tao amin'ny Cathay Pacific rehefa nampahafantarin‘ny [fr] fitantanana ny sidina sivily ao Shina (CAAC) tamin'ilay orinasa fa satria ireo mpiasa ao aminy nandray anjara taminà “hetsipanoherana tsy ara-dalàna” sy “hetsika feno herisetra” dia raràna tsy hahazo hiditra ny habakabaka shinoa ry zareo manomboka ny 10 Aogositra.
Ny 14 Aogositra, noroahan'ilay orinasa ny mpanamory roa [fr] sy mpiasa roa ety an-tanety voarohirohty tamin'ireo hetsipanoherana vao haingana. Andro roa taty aoriana, nanambara ny fametrahany fialàna ny talen'ny Cathay Pacific, M. Rupert Hogg.
Ny 20 Aogositra, nampahatsiahy ireo mpiasany ilay orinasa fa ny fanehoana fanohanana atao eny anaty tambajotra sosialy ho an'ireo fihetsiketsehana ao Hong Kong dia mety hanitsakitsaka ny fepetra vaovao napetraky ny CAAC. Tsy ireo lahatsoratra natao ho hitan'ny daholobe ihany no voakasik'ilay fampitandremana, fa koa ireo resaka manokana atao any anaty Facebook, Telegram sy ireo fampiharana hafa. Mazava loatra fa afaka aborak'ireo mpisompatra mpomba ny governemanta ireny hafatra ireny, amin'ny fampiasàna ny atao hoe doxxing na rehefa mandalo eny amin'ireo toerana fisavàna eny amin'ny sisintanin'i Shina.
Ny androtr'io ihany, i Jeremy Tam, mpanao lalàna avy amin'ny antoko mpandala ny demaokrasia “Civic Party”, nilaza tamin'ny mpanao gazety fa nametraka ny fialàny ao amin'ny Cathay Pacific mba ho “fiarovana ilay orinasa amin'ny fanafihana tsy an-drariny”. M. Tam dia mpanamory tao amin'ny Cathay Pacific efa nandritra ny roapolo taona.
Ramatoa mpitarika sendikà noroahan'ny Cathay Dragon
Noroahan'ny Cathay Dragon i Rebecca Sy, lehiben'ny sendikàn'ireo mpiasa mpikarakara sidina (Flight Attendant Union, FAU), taorian'ny nanamafisany fa avy ao amin'ny kaontiny tokoa no nahazoana ireo pikantsarin'ny lahatsoratra Facebook momba ireo hetsipanoherana ao Hong Kong. Afaka nivezivezy teo anelanelan'i Pékin sy Hong Kong Ratoa Sy ny 19 sy 20 Aogositra, saingy avy eo izy nilazana tsy ho tonga hiasa amin'ny sidina iray mankany Hangzhou ny ampitson'io.
Ny FAU dia iray tamin'ireo sendikà nandray anjara tamin'ny ftiokonana faobe tamin'ny 5 Aogositra. Miaraka amin'ny fanohanan'ireo sendikà enina hafa ao amin'ilay orinasa, maherin'ny 200 ireo sidina voatery nofoanana. Amin'ny maha-filoha mpitarika ny FAU azy, dia naneho ampahibemaso ny fanohanana ireo hetsipanoherana Rtoa Sy.
Nolazain'ny orinasa fa tsy misy ifandraisany amin'ny asa maha-mpitarika sendikà azy ilay fanapahankevitra handroaka an-dRtoa Sy, nefa tsy nomeny izay antony nahatonga ilay fandroahana. Tao anaty fanambaràna nivoaka tamin'ny 23 Aogositra, manamafy ny fanekeny hanaraka ireo fepetra shinoa ilay orinasa :
Orinasa fitaterana an'habakabaka iraisampirenena sady sangany izahay, miasa manerantany ary tsy maintsy manaraka ireo lalàna sy fepetra rehetra any amin'izay iasànay.
Tsy Rtoa Sy irery no voa mafy amin'ilay faritàna ho toy ny fandroahana noho ny antony politika. Ny fiombonamben'ireo sendikà ao Hong Kong (HKCTU) dia mitatitra fa mpiasa 14 amin'ireo orinasa fitaterana an'habakabaka no voaroaka taorian'ireo hetsipanoherana nitranga tsy ela akory izay, ka ny valo dia nisy ifandraisany tamin'ny zavatra natao tety anaty tambajotra. Ny fiarahamientan'ireo sendikà dia miomana ny hanao fihetsiketsehana iray manoloana ireo biraon'ny Cathay Pacific ny 26 Aogositra.
Mme Sy dia nampitaha ilay famoretana ny fahalalahana maneho hevitra ho toy ny “horohoro mafy” :
Tsy izaho irery no iharan'io. Ny sehatra iray manontolo no voadona, Hong Kong mihitsy. Rahoviana ity horohoro mafy ity no hitsahatra ?
Tsy hay izay fomba nahazoan'ny Cathay Pacific ireo pikantsarin'ny fàfana nisy ireo hafatra Facebook an'i Rebecca Sy. Na izany aza, tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, ny sampana misahana ny fifindramonina ao Shina dia nanomboka nisava ny telefaona findain'ireo mpivahiny mba hikarohana saripika na hafatra momba ireo hetsipanoherana ao Hong Kong, rehefa eny amin'ireo toerana fisavàna pasipaoro. Raha vao misy votoaty mampiahiahy tratra, alaina am-bavany sy hadiahadiana ireo mpivahiny. Na ohatra aza ny ankamaroan'ireo mpivahiny ka tsy voatàna na nosamborina tamin'ny fotoana nanaovana ny fanamarinana, azo antoka ny mety hampiasàn'ny governemanta shinoa ireny angondrakitra ireny ho aminà tanjona hafa.
Ireo mpandalina sasany mandika ilay famoretana ampiharin'ny manampahefana shinoa amin'ny Cathay Pacific ho toy ny fampitandremana alefa ho an'ireo orinasa iraisampirenena maro rantsana ao Hong Kong, fampahatsiahivana azy ireo fa tsy maintsy manaja ny politikan'i Shina momba an'i Hong Kong ry zareo, raha tsy izany dia hahataka tsy ho ao anatin'ny tsena shinoa intsony.
Fanampin'ny Cathay Pacific, marobe ireo kabinetrana iraisampirenena misy manampahaizana manokana momba ny fitantanana bokimbola [fr] no namoaka fampitandremana ho an'ireo mpiasa ao amin-dry zareo momba ireo lahatsoratra fanohanana hetsipanoherana eny anaty tambajotra sosialy.
Rehefa nifandimby ny taona, nahatefy fifandraisana akaiky tamin'ireo mpitantana orinasa ao an-toerana i Shina tamin'ny alàlan'ny fanendrena azy ireny ho solontenan'ny Kaonferansa Fakan-kevitra politikan'ny vahoaka shinoa sy tamin'ny fanomezana azy ireny ny zo manokana ho afaka hifidy amin'ny fifidianana izay ho mpanolotsaina araka ny lalàna sy ny kaomitim-pifidianana ny lehiben'ny mpanatanteraka ao an-tanàna.
Kanefa, ny fandraisana anjaran'ireo vondrona matihanina sy ireo sendikà tamin'ireny hetsipanoherana ireny dia nampiseho fa vitan'i Shina ihany koa ny nanondrana ireo fomba henjana fanaony mba hanerena ny sehatry ny fandraharahàna hanohana ireo tanjony politika, amin'ny alàlan'ny fanasaziana ny mpiasa ao aminy.
Fa na tsy mahafehy ny hetsika politikan'ireo mpiasa ao aminy aza ireo orinasa iraisampirenena, vitan'i Shina ny manetsika ireo media mifandray amin'ny antoko sy hatramin'ireo tia tanindrazana mpampiasa aterineto mba hanome “porofo” an'ireo orinasa sy ny mpitandro filaminana mba handraisan'izy ireo fepetra ara-pitsipika ho an'ireo mpiasa “nania”.
Raha mitohy ny fironana tahaka izao, atahorana ny hahita fandosiran'ireo atidoha avy ao Hong Kong handeha hipetraka sy hiasa any amin'ny firenena hafa, izay misy fahalalahana maneho hevitra.
Raha te-hahafantatra misimisy kokoa momba ireo hetsika ao Hong Kong natao hanoherana ny fanolorana olomeloka, tsidiho ny fandrakofana manokana ataon'ny Global Voices.